Italy spin ပြိုင်ပွဲ၏အခက်ခဲဆုံးတောင်တန်းများဖြစ်သော ULLER
စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အထူးသပြိုင်ပွဲများကိုစဉ်းစားသောအခါ, မလွှဲမရှောင်သည် အီတလီနိုင်ငံလည် ငါတို့စိတ်ကိုလှည့်လည်။ ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ မေလလတွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပသောပြိုင်ပွဲသည်အခြားသောကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးစဉ်ကြီးနှစ်ခုနှင့်အတူစက်ဘီး၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလိုအပ်ဆုံးလူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်စပိန်၏ခရီး။
ယင်းပြိုင်ပွဲကို၎င်း၏အမည်အရအီတလီ၌ကျင်းပလေ့ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်လည်းပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Giro တွင်ပြိုင်ပွဲ၏မတူညီသောအဆင့်များ၌သုံးပတ်ကြာသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
Giro အကြောင်းပြောသောအခါ၊ ပြိုင်ပွဲ၏အဆင့်များပြီးမြောက်ရန်အတွက်သင်တန်းသားများအားလုံးသည်နှစ်စဉ်ရောက်ရှိရမည့်တောင်များနှင့်သူတို့၏ခက်ခဲသောအောင်မြင်မှုများကိုဖော်ပြရန်လည်းလိုအပ်သည်။ Giro d'Italia တွင်ပိုမိုခက်ခဲသော (အထူး၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၃) သို့သွားသောအခြားလူမျိုးများကဲ့သို့ဆိပ်ကမ်းကတ်တလောက်မရှိခဲ့သော်လည်းအရောင်အားဖြင့်အပြာရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် အခက်ခဲဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မြင့်မားသော၊ နောက်ဆုံးအဆင့်ရှိသည့်အစိမ်းရောင်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းများအတွက်အနီ၊ အဝါနှင့်မီးခိုးရောင်တို့ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက Giro d'Italia ၏အခက်ခဲဆုံးတောင်တန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ။
Giro ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလက္ခဏာများအနက်တစ်ခုမှာအီတလီကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးလူကြိုက်များသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ကျင်းပခြင်းအပြင်မည်သူမျှမငဲ့ကွက်သောတောင်တန်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြောက်မြားစွာသောအီတလီတောင်တန်းဒေသများသည်ဆိပ်ကမ်းများရွေးချယ်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမည်သည့်အခါမျှမတူညီသောလမ်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်သေချာစေသည်။
ကွဲပြားခြားနားမှု၊ အရှည်၊ မညီမျှမှု၊ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမြင့်စသည့်ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်အီတလီပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်အခက်ခဲဆုံး ၁၀ ခုဖြစ်သည်။
Alel အရှေ့ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး Stelvio သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်နာမည်အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြင့် ၂,၇၅၇ မီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိသောဤဖြတ်သန်းမှုသည်ဤအဖြစ်အပျက်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အခက်အခဲ (အဲလ်ပ်တောင်တန်းတွင်ဒုတိယအခက်ခဲဆုံး) အပြင်ကွေးကောက်များ၏မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းသည်ဒဏ္becomeာရီတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အားကစား။ ပရာတိုမြို့မှပျမ်းမျှခြားနားချက်မှာ ၇.၃၉% ရှိပြီး ၂၄.၃ ကီလိုမီတာမြင့်တက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစက်ဘီးစီးသူများသည်မီတာ ၁၈၀၀ ဝန်းကျင်အတက်နှင့်အတက်များအကြားခရီးသွားကြလိမ့်မည်။ သူခေါ်သောပြိုင်ပွဲတွင်သူပါဝင်တိုင်း Cima Coppi,မြင့်မားသောအမြင့်၏ဆိပ်ကမ်းများအားပေးပြီးမှအမည်။ နှင်းကျခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်အထက်ပါတောင်စောင်းများသည်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။
Mortirolo သည် Valtellina နှင့် Upper Val Camonica တို့၏တောင်တန်းဒေသများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ၄၂ မိနစ်နှင့် ၄၀ စက္ကန့်အထိတက်ရန်စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Giro ၏အဓိကဖြတ်သန်းရာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောကတ္တရာနှင့်လမ်းကျဉ်းရှိသောကြောင့်စက်ဘီးစီးသူများအလွယ်တကူလျှောစီး။ မသွားသောကြောင့်စက်ဘီးစီးသူများသွားလာခြင်းကိုအလွန်ခက်ခဲစေသည်၊ မြေပြင်အနေအထားရှိပြီးဖြစ်သောအခက်အခဲများအပြင်ကွေးကောက်များနှင့်တောင်စောင်းများသည်မလွယ်ကူလှပါ။ ၁၁.၈ ကီလိုမီတာသည်ပျမ်းမျှတောင်စောင်း ၁၀.၉% ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးတောင်စောင်း ၁၇% ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏စက်ဘီးနှင့်အတူtheရိယာ၌အစဉ်အဆက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်က upload, သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတွက်ချက်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သော Giro အားကစားသမားများကဲ့သို့ခံစားရခံစားရနိုင်ပါတယ်!
Zoncolan သည်ပေါင်ပေါင်၏အခက်ခဲဆုံးတောင်တက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Dolomites ၏ထိပ်ဆုံးတွင် ၁၇၅၀ မီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးပရိသတ်အားလုံးအတွက်တက်စရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ Ovaro မြို့မှအမြင့်အထိ ၉.၈ ကီလိုမီတာတိုသောပျမ်းမျှ ၁၂.၂% ပျမ်းမျှကွာခြားချက်နှင့်လျော်ကြေးပေးသည်။ သူတို့ထဲကတချို့အတွက် 1750 နီးကပ်အများဆုံး။ ဤတောင်ကိုငရဲတံခါးဟုလူသိများသည်မှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
အီတလီနှင့်ဆွစ်ဇာလန်အကြားတစ်ဝက်တွင် Passo della Spugla သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ပြိုင်ပွဲမပြီးမီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည့်အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၉ ကီလိုမီတာရှိသောမီတာ ၂၀၀၀ ကျော်အမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးပျမ်းမျှခြားနားမှု ၇.၃% ရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင်းခွာပုံစံပုံသဏ္vesာန်နှင့်အထင်ကြီးလောက်သောပုံရိပ်များကိုချန်ထားသည့်လှပသောအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
၎င်းသည် ၂၀၂၁ ထုတ်ဝေမှု၏အရှည်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဆွစ်တောင်တန်းများတွင်တည်ရှိပြီး ၂၃.၇ ကီလိုမီတာအတက်နှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၆.၂% ရှိသည်။ လမ်းကြောင်း၏ပထမတစ်ဝက်သည် ပိုမို၍ တောင်းဆိုရန်ခက်ခဲသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကီလိုမီတာ ၁၄ ရှည်အတွက်ပျမ်းမျှအနိမ့်သည်အမြဲတမ်း ၇ နှင့် ၈% ဖြစ်သည်။ အားကစားသမားများအတွက်ခွန်အားနှင့်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု
ထို့အပြင်တောင်ပိုင်း Rhetics တွင်အမြင့် ၂,၆၂၁ မီတာရှိသောအဲလ်ပ်တောင်တန်းတွင်လည်း Passo Gavia သည်မည်သူမျှလည်းလည်းချန်မထားခဲ့ပါ။ အဖြစ်လူသိများ သုညအောက်ငရဲဒီဆိပ်ကမ်းအကြောင်းပြောဆိုရန်များစွာပေးထားသည်။ ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် Passo Gavia သည်အဓိကကျသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်ခဲ့သည့်နှင်းများနှင့်နှင်းထုအပူချိန်များကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့်တက်သည် Gavia သည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့သည့်နေ့များအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ မိုးလေ ၀ သအခြေအနေသည်မည်သည့်ပါ ၀ င်သူကိုမျှမချန်မထားခဲ့ပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Giro တွင်မရှိခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲ၏ ၁၀၄ ကြိမ်မြောက်ပြိုင်ပွဲတွင်သူပြန်လာနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ စင်မြင့် ၁၆ တွင် ၁၄ ကီလိုမီတာရှိပြီးပျမ်းမျှ ၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိသည်။ ထံမှဖိအားပြီးနောက်သို့သော် စက်ဘီးစီးနောက်ဆုံးတော့နေ့ကနေနုတ်ထွက်သွားကြသည်။ အဆိုပါ Passo Fedaia ကိုလည်းအဖြစ် nicknameded ချန်ပီယံသင်္ချိုင်း ၎င်း၏ချဉ်းကပ်လမ်းများပေါ်တွင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြသောခေါင်းဆောင်များအားလုံးအတွက်၎င်းသည်နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အပျက်၏ဒဏ္myာရီအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ယိမ်းယိုင်ခြင်းများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်တော့ပါ၊ စက်ဘီးစီးသူများတက်ခြင်းကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည့်အခြားဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ်သန်းမှုက ၁၆၂ ကီလိုမီတာရှိပြီး၊ ရေရှည်။၁၃. ကီလိုမီတာသာရှိသော ၃.၆% သာရှိသည်။ ကတ္တရာမရှိခြင်းနှင့်အားကစားသမားများအနေဖြင့်ရှေ့သို့မတက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ပြcomplနာများကိုမပြသင့်ပါ။ သတင်းကောင်းလား သင်ထိပ်ကိုရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အဆုံးသို့ဆင်းခြင်းသည် ၄ ​​ကီလိုမီတာသာရှိပြီးဤအချိန်ခင်းခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးခြင်း၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲတစ်ခုမှာစက်ဘီးစီးသူများအတွက်အနားယူခြင်းနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Passo Fedaia ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်လူအနည်းငယ်သာ Passo Pordoi ကိုအလွန်လျင်မြန်စွာရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရှည်ဆုံးစောင်းသည် ၁၃ ကီလိုမီတာနှင့် ၆% ယိုယွင်းသည်။
Passo Giau သည် ၂၀၂၁ ၏အဓိကအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအများဆုံးမဟုတ်ပါကအဆုံးအဖြတ်ပေးသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိပ်ဆုံးမှ ၁၈ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်မည်သည့်ပန်းတိုင်ကိုကျော်။ ယေဘူယျအဆင့်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ရိုက်နှက်ဖို့ခြေလှမ်းတစ်ခုလုံး!
အထက်ပါအဆင့်များအပြင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များစွာသော Giro d'Italia အတွက်အားကစားသမားများအတွက်အလွန်အမင်းအခက်အခဲနှင့်အန္တရာယ်များကြောင့်ဘေးဖယ်ထားရမည့်ဆိပ်ကမ်းအသစ်များကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကအဆိုပြုခဲ့သည်။
Trento အနီးတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းကို ၇.၅ ကီလိုမီတာသာရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အခက်ခဲဆုံးဖြတ်သန်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အကြောင်းရင်း? ၄ င်း၏ဆင်ခြေလျှောများမှာ ၄၅% ခန့်မညီမညာဖြစ်နေသောကြောင့်ဤတက်သည်များသည်အစပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏အလွန်အမင်းအခြေအနေများက၎င်းအားလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ MTB စက်ဘီးဖြင့်တက်ရန်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်စေပါသည်။ ၂၀၁၀ မှာ Giro ကိုသူထပ်ထည့်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့မပြီးသေးပါဘူး။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၅.၅ ကီလိုမီတာတက်ခြင်းနှင့်တောင်စောင်းတွင် ၁၀% ရှိသော Crostis Mount သည်အခက်ခဲဆုံးနှင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Carnia ဒေသရှိအဲလ်ပ်တောင်တန်းများတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းတောင်သည်အထူးသဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Giro d'Italia လမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အဲလ်ဘတ်တိုကွန်ဒေါဒေါကဲ့သို့သောစက်ဘီးစီးသူများစွာက၎င်း၏အန္တရာယ်ရှိသောမြစ်ဖျားခံမှုကိုသတိပေးခဲ့ကြပြီးနောက်မှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပေါင်းစပ်ကတ္တရာကြမ်းပြင်နှင့် ရေရှည် (မြေ)
အကယ်၍ သင်စက်ဘီးစီးခြင်းလောကသည်အရှိန်အဟုန်မြင့်နေသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ စက်ဘီးစီးပညာရှင်များသည်ထိုကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲများတွင်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ခက်ခဲသောလမ်းများအကြောင်းပြောပြီးနောက်သင်စိတ်ပြောင်းသွားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အီတလီနိုင်ငံလည်။ ဆန့်ကျင်ပေါ်လျှင်,သင်ဟာဒီအားကစားကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သင်လမ်းလျှောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်၊ လမ်းပေါ်မှာသွားချင်တယ်၊ သင်ဟာဒီပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာအဆင့်မြင့်အားကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင်မှတောင်တန်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးအသက်ရှင်သန်နိုင်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့် မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ?
Giro d'Italia နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Giro d'Italia ဆိုတာဘာလဲ
Giro d'Italia သည်စက်ဘီးစီးခြင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သောဆွစ်ဇာလန်နှင့်သြစတြီးယားနိုင်ငံတို့တွင်ကျင်းပသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ၏ Grand Tour သုံးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Tour de France နှင့်စပိန်၏ Tour တို့ဖြစ်သည်။
Giro d'Italia ကိုဘယ်အချိန်မှာကျင်းပသလဲ။
Giro d'Italia ကိုနှစ်စဉ်မေလတွင်ကျင်းပပြီးသုံးပတ်ကြာသည်။
၂၀၂၁ Giro d'Italia တွင်အဆင့်မည်မျှရှိသနည်း။
၂၀၂၁ Giro d'Italia တွင်အဆင့် (၂၁) ဆင့်ရှိပြီးစုစုပေါင်း ၉ ကီလိုမီတာ (၃,၄၁၀) ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၁ Giro d'Italia ကိုဘယ်သူနိုင်ခဲ့လဲ။
အီဂန်ဘာနာသည်ယခုနှစ် Giro d'Italia တွင်အောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးကိုလံဘီယာ၏ဒုတိယရင်ခွင်တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Aran Valley ရှိစွန့်စားမှု၊ အားကစားနှင့်အားကစားခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကျော်ကြားသော Aran Valley သည် freerider Aymar Navarro နှင့်တူသလား။ အတိအကျ! ဤသည်ချိုင့်ဝှမ်းစျေးနှုန်းသည် Pyrenees တွင်တည်ရှိပြီးအထူးသဖြင့် Catalonia ရှိ Lleida ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်သည်။
သင် MTB ကိုကြိုက်လျှင်သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုစတင်ရန်အားပေးလိုသည်ဆိုပါကမက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာရှိအဆင့်များအားလုံးအတွက် MTB လမ်းကြောင်းများစွာကိုဤစာမူတွင်သင့်အားထားရှိမည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောချိုင့်ဝှမ်း ၁၀ ခု
ချိုင့်ဝှမ်းများလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်များမှာ! ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်တရာမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝကို၎င်း၏လှပတင့်တယ်သောအရာအားလုံးတွင်မြင်တွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်မသိသောကြောင့်ချိုင့်များသည်မြေဖြစ်သည်